မြဝတီမြို့၌ တရားမဝင် ဂိမ်းဆိုင်များကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ ဂိမ်းဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို ဖမ်းဆီးရမ?? - Yangon Media Group
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင်းနှင့် မြို့ပြင်ရှိ တရားမဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသော လောင်းကစားဂိမ်းရုံများအား တပ်မ တော်၊ နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နယ်ခြား စောင့်တပ်တို့မှပူးပေါင်းပြီး လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရာ တရားမဝင်လောင်းကစားရုံတစ်ရုံကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး ပိုင်ရှင်နှင့်လောင်းကစားသူများ ထွက် ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်း သိရသည်။
မြဝတီခရိုင်ရဲမှူးကြီးဒုရဲမှူးကြီး အောင်နိုင်ထွန်း၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးစည်သူရည်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ တပ်နယ်မှ တပ်မတော်သားများ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်၊ တပ်နယ် (၃)နှင့်တပ်နယ်(၄)တို့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ စုစုပေါင်း အင်အား ၇ဝခန့်သည် ဇန်နဝါရီ ၂၂ရက် ည ၈နာရီခွဲက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပါဝင်လျက် မြဝတီမြို့အတွင်း လောင်း ကစားရုံများအား လိုက်လံစစ်ဆေး ရာ မြဝတီမြို့ အမှတ် (၅)ရပ်ကွက်၊ ဖားခြောက်ကောင်အနီး သမ္မဂသုခ တောရကျောင်းဝင်းအတွင်း လောင်း ကစားဂိမ်းရုံတစ်ရုံအားတွေ့ရှိသဖြင့် ဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီး ပိုင်ရှင်မှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။
”မြဝတီမြို့မှာ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က နယ်ခြားစောင့်တပ်နယ် ၃ က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ လောင်းကစားရုံ တွေ ပိတ်သိမ်းဖို့ လိုက်လံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၂၁ရက်မှာ လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေ ပြုလုပ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း လောင်းကစားရုံတွေ ပိတ်သိမ်းဖို့ ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်တယ်။ ဒါ ကို တချို့ကလိုက်နာမှုမရှိဘဲ လောင်းကစားရုံတွေ ဆက်လက် ဖွင့်ထားကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန် တော်တို့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့က ဒီကနေ့မှာ လိုက်လံဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း ဆက်လက်ဖမ်းဆီးမှာဖြစ်ပြီး ဖမ်းဆီးရမိရင် ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး ဒုရဲမှူးကြီးအောင်နိုင်ထွန်းက ပြောကြားသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသည့် လောင်းကစားပစ္စည်းများမှာ အလျားခြောက် ပေ၊ အနံ လေးပေရှိ ငါးမန်းလောင်း ကစားစက် ကိုးလုံး၊ အလျား ခုနစ် ပေ၊ အနံ လေးပေရှိ ဖဲလောင်းကစား ခုံ လေးခုံ၊ ကစားရာတွင် အသုံးပြုသည့် ထိုင်ခုံအလုံး ၅ဝ၊ စုစုပေါင်း ကာလတန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း ၃ဝဝ ကျော်နှင့် လောင်းကစားရာ၌ အသုံးပြုသည့် ငွေကျပ်၂၂သိန်းနှင့် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၅ဝဝဝတို့အား သက်သေများရှေ့တွင် ရှာဖွေပုံစံဖြင့် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားသော ဂိမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင်အား ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ဆန်းချက်ဇ် အား အပြီးသတ် ခေါ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း မန်ယူအသင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ၊ ကလပ်အသင်းများ??
ဖိလစ်ပိုင် အလှဆုံး မင်းသမီး မာရီနာရီဗာရာ
ဆံတော်ရှင် ဇင်းကျိုက်စေတီတော်၏ စိန်ဖူးတော်နှင့် ငှက်မြတ်နားတော်တို့အား စေတီတော်အထွတ်မှ ရ?